Ngwọta maka Business User | Wondershare Video Converter Ultimate for Mac
Olu ikikere maka Wondershare Video Converter Ultimate for Mac
M chọrọ iji wụnye on
2-5 PC 6-10 PC 11-15 PC 16-20 PC 21-50 PC 51-100 PC Ihe karịrị 100 PC
Achọrọ m iji na
6-10 Devices, 1 PC 11-15 Devices, 1 PC 16-20 Devices, 1 PC 21-50 Devices, 1 PC 51-100 Devices, 1 PC 101-150 Devices, 1 PC 151-200 Devices, 1 PC Unlimited Devices, 1 PC 1+ PC
Ndụ License 1 Year License
Nyefere a Ajụjụ Ị ga-meghachi omume n'ime 24 awa.
2-5 PC, ndụ License
Afghanistan Albania Algeria American Samoa Andorra Angola Anguilla Antarctica Antigua na Barbuda Argentina Armenia Aruba Australia Austria Azerbaijan Bahamas, The Bahrain Bangladesh Barbados Belarus Belgium Belize Benin Bermuda Bhutan Bolivia Bosnia na Herzegovina Botswana Bouvet Island Brazil British Indian Ocean Territory British Virgin Islands Brunei Bulgaria Burkina Faso Burundi Cambodia Cameroon Canada Cape Verde Cayman Islands Central African Republic Chad Chile China Christmas Island Cocos (Keeling) Islands Colombia Comoros Congo Cook Islands Costa Rica Croatia Cuba Cyprus Czech Republic Denmark Djibouti Dominica Dominican Republic East Timor Ecuador Egypt El Salvador Equatorial Guinea Eritrea Estonia Ethiopia Falkland Islands (Malvinas) Faroe Islands Fiji Finland France French Guiana French Polynesia French Southern / Antarctic Lands Gabon Gambia Georgia Germany Ghana Gibraltar Greece Greenland Grenada Guadeloupe Guam Guatemala Guinea Guinea-Bissau Guyana Haiti Nụrụ na McDonald Islands Honduras Hong Kong Hungary Iceland India Indonesia Iraq Ireland Islam Republic nke Iran Israel Italy Ivory Coast Jamaica Japan Jọdan Kazakhstan Kenya Kiribati Korea, North Korea, South Kuwait Kyrgyzstan Lao Peoples Democratic Republic Latvia Lebanon Lesotho Liberia Libya Liechtenstein Lithuania Luxembourg Macau Macedonia Madagascar Malawi Malaysia Maldives Mali Malta Man, Isle nke Marshall Islands Martinique Mauritania Mauritius Mayotte Mexico Micronesia Moldova, Republic nke Monaco Mongolia Monserrat Morocco Mozambique Myanmar (Burma) Namibia Nauru Nepal Netherlands Netherlands Antilles New Caledonia New Zealand Nicaragua Niger Nigeria Niue Norfolk Island Northern Mariana Islands Norway Oman Pakistan Palau Panama Papua New Guinea Paraguay Peru Philippines Pitcairn Poland Portugal Puerto Rico Qatar Reunion Romania Russia Rwanda Saint Lucia Samoa San Marino São Tomé na Príncipe Saudi Arabia Senegal Serbia na Montenegro Seychelles Sierra Leone Singapore Slovakia Slovenia Solomon Islands Somalia South Africa South Georgia / Sanwichi Islands Spain Sri Lanka St. Helena St. Kitts na Nevis St. Pierre na Miquelon St. Vincent na Grenadines Sudan Suriname Svalbard / Jan Mayen Islands Swaziland Sweden Switzerland Syria Taiwan Tajikistan Tanzania, United Republic nke Thailand Togo Tokelau Tonga Trinidad na Tobago Tunisia toro toro Turkmenistan Turks and Caicos Islands Tuvalu US Minor outlying Islands Uganda Ukraine United Arab Emirates United Kingdom United States of America Uruguay Uzbekistan Vanuatu Vatican City State (Nsọ Lee) Venezuela Vietnam Virgin Islands Wallis and Futuna Islands Western Sahara Yemen Zaire Zambia Zimbabwe
Aha ọrụ * Analyst Architect Business Manager Ndụmọdụ Mmepụta Director Ọgwụgwụ ọrụ IT Manager Ịzụta Nnọchiteanya Ukwu Senior Executive onye na-eso onye isi Web Manager Ndị ọzọ
ọ bụ maka onye ọ bụla na nzukọ ị na-na Right Ebe Ọzọ ada ekekem ye idaha
N'ihi na Eduction
Ma ị na-onye nkuzi na-emepe emepe a ọzọ-ekere òkè usoro ọmụmụ; onye nchịkwa arụ ọrụ iji meziwanye mmekota; ma ọ bụ a na-amụrụ eke akwụkwọ oru ngo, video malitegharịa, Wondershare awade gị ngwá ọrụ nke pụrụ inyere gị Excel.
Ujo klas gị. Mesie nkụzi gị
Tọghata gị echiche n'ime videos na nweta nkwalite gị oru ngo si nkezi ka magburu onwe, ịkọrọ gị ọrụ na ndị ọzọ n'oge ọ bụla n'ebe ọ bụla, na-adị mfe ime ka gị na akara na gị ọrụ kasị mma ebi.
Ka gị echiche si na-egwu
Iji mee ka gị na klas ọzọ na;, nnukwu na okike, gbarie omenala ozizi ụzọ ma na-eduzi ndị ọzọ pụrụ iche klaasị.
Jide n'aka gị alụmdi mụ asọmpi, gị ọhụụ azụlite dijitalụ mmuta, ike ọgaranya web ahụmahụ, na ndị ọzọ ga-atụgharị n'ime eziokwu na VCU.
Họrọ A License >>
N'ihi na Ndị mmadụ n'otu n'otu & Family
Life ga-aghọ ihe ebube mmadụ na ezinụlọ ma ọ bụrụ na ị nwere ike ịmepụta ọtụtụ ịtụnanya na gị mbụ nkịtị ndụ. Video ndụ na-aghọ nnọọ ewu ewu na i nwere ike ịkọrọ gị obi ụtọ awa 'videos na ndị enyi ọ bụla. Wondershare Na-pụrụ iche na-enye gị na nke kacha mma video ngwọta.
150+ Formats E Nwere, Video Ịkekọrịta enweghị ihe ọ bụla mmachi
Tọghata n'elu 150 audio & video formats, òkè video na gị Smartphones, DVD, TV na na enweghị ihe ọ bụla mmachi.
Mee Life Creative &-atọ Ụtọ
Iyi gị mgbasa ozi na-TV, enwe n'ụlọ gị gị na videos nakwa na fim gị na ezinụlọ gị na nnukwu ihuenyo. All-na-otu Video toolbox-eme ka ị dị iche iche visual ahụmahụ!
N'ihi na Business & Organization
Na iri puku kwuru iri afọ 'ìgwè na ụwa na-eduga technology on video ubi, Wondershare enye adọ na irè azụmahịa ọrụ. Ị na-n'aka ịchọta ndị kasị mma video ngwọta maka azụmahịa gị.
Na-eme ihe rụọ ọrụ nke ọma - Ozi Meziri, More-ege Ntị
Share video ọzọ conveniently na nzukọ, na-akwado 150+ Formats na dị iche iche ngwaọrụ, nye gị na ọrụ na azụmahịa video ngwọta.
Na-eme ihe Mara mma - Ozi oghere, More Videos
Mfe resize videos; Mpikota onu videos nyak ọtụtụ ihe ndị ọzọ nchekwa oghere!
World Klas Techology - 30X Faster, 3D & 4K, ogbe
Tọghata video 30X ngwa ngwa karịa asọmpi 'ngwaahịa enweghị adịkwa àgwà, na-akwado 3D & 4K na ogbe video akakabarede.
N'ihi na Govement & Non-Profit
Government na-abụghị uru òtù na-mgbe na-atụ anya izute ụkpụrụ dị elu site ọha na eze. Na Wondershare, anyị na-enyere ọchịchị na nonprofit òtù mezuo ha tiri ụkpụrụ na nduzi site n'inye competitively-ọnụ na ọkachamara ngwọta.
Na ị na-achọrọ iji tọghata dị iche iche formats nke vidiyo si na dị iche na isi mmalite ego ọdịnaya ngwa ngwa, elu arụmọrụ na mma-ime ga-isi akụkụ n'oge arụ ọrụ gị. Wondershare Nwere ike inye zuru okè ngwọta nyere gị aka pụta.
Gị ahuhu enweghị nsọtụ, ma gị ego nwere ike ghara ịbụ. Na-akwado ndị na-abụghị uru òtù, Wondershare awade a pụrụ iche ego iji nyere gị aka na-gị ozi na-esonụ larịị. Ọ bụrụ na ị na-achọ a video ngwọta, dị nnọọ abịa anyị!
Ugbu a Dịkwuo gị ahịa Afọ Ojuju na uru-kwukwara Service
Ugbu a Ibu & Ukwuu >>
Mara nnọchiteanya dị inyere gị aka site nzi ndụ chat na email nzaghachi n'ime 24 awa.
Wondershare AllMyTube for Mac Emelitere
Download online videos si 1000+ video nkekọrịta saịtị dị ka Youtube, Vimeo ma ọ bụ Dailymotion na gị Mac ma nụ ụtọ ha na ọ laa. Mụtakwuo
Mfe ike gị DVD na 90+ free DVD menus on Mac Mụtakwuo